Guryo Kirada gudaha Leigh, Greater Manchester
Real Estate Listings: Residential homes Houses Greater Manchester Leigh
Liisaska ma jiraan
Whooops, ma liis gareeyaan aasaaska raadinta raadinta. Tijaabi Raadinta Google:
Houses For Rent in Leigh, Greater Manchester
Guri waa dhisme u shaqeeya sidii guri, oo u dhexaysa guryo fudud sida guryo ku meelgaar ah oo qabiilooyinka reer-guuraaga ah iyo hoos udhaca ku harsan dhulalka shanaad ee adag, qaababka go'an ee alwaaxa, lebenka, la taaban karo ama waxyaabo kale oo ay ku jiraan tuubbooyinka, hawo-mareenka iyo nidaamyada korantada.   Guryuhu waxay adeegsadaan habab saqafyo kaladuwan oo kaladuwan si roobabku u da'aan sida roobka oo kale ha u soo galaan guriga. Guryuhu waxay lahaan karaan albaabo ama qufullo si ay u sugaan meelahooda la dego oo ay uga ilaaliyaan dadka deggan iyo waxyaabaha ku jira tuugada ama tuugada kale. Inta badan guryaha casriga ah ee caadiga ah ee dhaqamada reer galbeedka waxay lahaan doonaan hal ama dhowr qol iyo musqulo, jikada ama meesha wax lagu karsado, iyo qolka jiifka. Guri wuxuu lahaan karaa qol cunto gooni ah, ama meesha wax lagu cuno waxaa lagu dhexgali karaa qol kale. Qaar ka mid ah guryaha waaweyn ee Waqooyiga Ameerika waxay leeyihiin qol madadaalo. Bulshooyinka dhaqanka ku saleysan miraha-beeraha, xayawaanka guryaha sida digaagga ama xoolaha waaweyn (sida lo'da) ayaa laga yaabaa inay qayb ka mid ah guriga la wadaagaan aadanaha. Qaybta bulshada ee ku nool guri waxaa loo yaqaanaa guri. Badiyaa, qoysku waa unug qoys oo nooc ah, in kasta oo reeraha sidoo kale ay noqon karaan kooxo kale oo bulsheed, sida qolal wada degan ama, qol qol qol ah, shaqsiyaad aan xiriir lahayn. Guryaha qaar waxay leeyihiin guryo ay ku noolaadaan hal qoys ama koox la mid ah; Guryaha waaweyn ee loo yaqaan guryaha-guryaha ama guryaha safka ah waxay lahaan karaan guryo fara badan oo qoys oo isku qaab ah. Guri waxaa la socon kara dhismayaal dibedda ah, sida garaashka gawaarida ama daadinta qalabka beeraha iyo aaladda. Guri wuxuu lahaan karaa daaqad ama barxadda hore, oo u adeegta sidii aagag dheeri ah oo ay deggeneyaashu ku nasan karaan ama wax cunaan.